जापानका कम्पनीमा महिलाले चश्मा लगाउन नपाउने ! – " सुलभ खबर "
जापानका कम्पनीमा महिलाले चश्मा लगाउन नपाउने !
जापानका केही कम्पनीहरूले कामको समयमा महिलाहरूलाई चश्मा लगाउन प्रतिबन्ध गरेको छ। जापानका स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार महिलाहरूलाई चश्मा लगाउन प्रतिबन्ध गर्नुका कारण कम्पनीपिच्छे फरक–फरक छन्।
परम्परागत शैलीका रेस्टुरेन्टहरूले जापानी पोशाकमा चश्मा लगाउँदा राम्रो नदेखिने र महिलाको मेक अप पनि चश्माले छेकिने भएकाले चश्मा नलगाउने तर्क राखेको छ।एयरलाइन्स क्षेत्रमा भने सुरक्षालाई आधार बनाउँदै चश्मा लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको बिबिसीले जनाएको छ।
विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न तर्क आए पनि चश्मा प्रतिबन्ध गर्नुको ठ्याक्कै कारण भने यकिन भइसकेको छैन। चश्मा लगाउनेहरूले अब लेन्स लगाउनुपर्ने बताइएको छ।
जापानी नेटवर्क निप्पन टिभीले पहिलोपटक यसबारे समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। निप्पन टिभीले नै जापानमा महिला श्रमिकहरूले चश्माको साटो कन्ट्याक लेन्स लगाउनु पर्ने भन्दै वकालत गर्ने कम्पनीहरूका बारे कथा चलाएको थियो।
खबर सार्वजनिक भएरेसँगै यो नियमको विरोध सुरू भएको छ। महिलाहरूलाई एउटा कम्पनीका कारण लेन्स लगाउन बाध्य बनाइएको भन्दै यसविरूद्ध आवाज उठिरहेको छ।
केहीले यसलाई जापानी स्कुलहरूको कडा नियमसँग तुलना गरेका छन्, जसमा स्कुलका विद्यार्थीलाई कपाल रंगाउन नदिई कालै राख्न बाध्य पारिएको छ।
क्योटो विश्वविद्यालयको समाजशास्त्रका प्राध्यापक कुमिको नेमोटोका अनुसार महिलाहरूलाई चश्मा लगाउन प्रतिबन्ध गर्नुको कुनै अर्थ छैन।यसलाई विभेदकारी नियमका रूपमा लिँदै उनले भनेका छन्, ‘यो लैंगिक विभेद हो, परम्परागत जापानी सोच हो।’
कम्पनीले महिलालाई कामका आधारमा भन्दा पनि एक महिलाको हिसाबमा हेरिरहेको प्राध्यापक नेमोटोको भनाइ छ। यसअघि पनि जापानमा महिलाले कामको समयमा अग्ला हिल जुत्ता लगाउनु आवश्यक र उपयुक्त भन्दै जापानका स्वास्थ्य र श्रममन्त्री टकुमी नेमोटो आफैंले भनेका थिए।